ဝန်ကြီးများရုံး အား ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုမည်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ၀န်ကြီးများရုံး အား ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုမည်..
၀န်ကြီးများရုံး အား ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုမည်..
Posted by ဦးကောက် on Oct 18, 2011 in History, Myanma News |9comments
သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားပြီး သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၁၂၁ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ၀န်ကြီးများရုံး (အတွင်းဝန်ရုံး)အား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုမည်ဟုသိရ..
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကြောင်းတွင် သမိုင်းအစဉ်အလာ၊ သမိုင်းကြောင်း ကြီးမားခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ ၀န်ကြီးများရုံး (အတွင်းဝန်ရုံး)အား ပုဂ္ဂလိကသို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် နိုင်ရန် ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း အာဆီယံ-ဂျပန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲဥက္ကဋ္ဌ နှင့် မြန်မာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်းဘုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာခင်ရွှေ မှ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
၀န်ကြီးများရုံး (အတွင်းဝန်ရုံး) အား မည်သူမဆိုငှားရမ်းကာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း၊ လုပ်ကိုင်မည့် အဖွဲ့ များအနေဖြင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဘုတ်အဖွဲ့(Myanmar Tourism Board)နှင့် လာရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပြီး အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် တင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအပြင် ရန်ကုန်၊ အလံပြ ဘုရားလမ်းရှိ စစ်ရုံးချုပ်ကိုလည်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် စီစဉ် ထားကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်မှုများပြားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ပြည်ပခရီးသွားများ လာရောက်မည့် ပမာဏအတွက် လုံလောက်သည့် ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်းများ မရှိသည့် အတွက်လည်း ယခုကဲ့သို့လုပ်ကိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုလည်း သိရသည်။
ဒီလိုပဲ အထင်ကရသမိုင်းတွေ နောင်လာနောက်သား သိသင့်တဲ့ သမိုင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အဆောက်အအုံကြီးကိုတော့ ဘယ်လို စည်းကမ်းချက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဖို့ လုံးဝမသင့်ပါဘူး။
“ပန်းဆိုးတန်းနားမှာရှိတဲ့ ၀န်ကြီးများရုံးကို ငှားမယ်။ ငှားတဲ့အခါမှာ ၀န်ကြီးများရုံးမှာရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းတွေကို လုံးဝပြုပြင်လို့ ထိလို့မရဘူး။ အထဲမှာတော့ ပြင်ဆင် လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်။ ငှားပြီးလုပ်မယ့်သူတွေ MTB ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ MTB နဲ့ အသေးစိတ်အချက်တွေ လာဆွေးနွေး နိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ကတစ်ဆင့် တင်ပြပေးမယ်။ အာဆီယံ-ဂျပန် ဆွေးနွေးပွဲမှာလလည်း ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ဖိတ် ခေါ်မယ်၊ အဲဒီအခါမှာ စက်မှုလုပ်ငန်း ကဏ္ဍတင်မကပဲ ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွက်ပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်သွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားတွေ အခုထက်ပိုဝင်လာမယ့် အနေအထားရှိသလို ၀င်လာရင် လည်း ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်းတွေ အများ ကြီးလိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖိတ်ခေါ်သွားမှာပါ။ ရန်ကုန်က စစ်ရုံးချုပ်ကိုလည်း ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက် ဟိုတယ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်” ဟု ဒေါက်တာခင်ရွှေက အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ပြောကြား ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ ၀န်ကြီးများရုံး(အတွင်းဝန်ရုံး)ကို ပါလီမန်ခေတ်က တွေ့ရစဉ်
စစ်ရုံးချုပ်အား ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခြင်းမှာ အကျိုး ရှိနိုင်သော်လည်း သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားပြီး နောင်လာနောင်သားများအတွက် အမှတ်တရထား ရှိသင့်သည့် ၀န်ကြီးများရုံးကိုမူ ပြတိုက် အဖြစ်ဖြင့်သာ ထိန်းသိမ်းထားရှိသင့်ကြောင်း၊ စီးပွားရေး အလို့ငှာ အသုံးပြုမှုအတွက်မူ စဉ်းစားချင့်ချိန်သင့်ကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။
“ဒီလိုပဲ အထင်ကရသမိုင်းတွေ နောင်လာနောက်သား သိသင့်တဲ့ သမိုင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အဆောက်အအုံကြီးကိုတော့ ဘယ်လိုစည်းကမ်းချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဖို့ လုံးဝမသင့်ပါဘူး။ တကယ်ဆိုပြတိုက် အဖြစ်သာ ဖွင့်လှစ်သင့်တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဆောက်အအုံကြီးပါ”ဟု သမိုင်းပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဒုတိယစစ်ပွဲ အပြီး ရန်ကုန်မြို့ကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟို ဌာနအဖြစ် အတွင်းဝန်ရုံးကို ၁၈၆၇ ခုနှစ်၌ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကကမ်းနားလမ်း၌ တည်ရှိခဲ့ သော်လည်း ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် လက်ရှိ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းတို့အကြား၌ပြောင်းရွှေ့ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပင်မဆောင် မှာ ၁၉၀၂ ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးပြီး အရှေ့ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်ဆောင်များ မှာမူ ၁၉၀၅ ခုနှစ်၌ အပြီးသတ်ခဲ့၏။ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကျပ် ၂၅ သိန်းကျော် ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းဝန်ရုံးသည် အင်္ဂလိပ်ခတ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီး အတွင်းဝန်ချုပ်နှင့် အတွင်းဝန်များ ဖြစ်ကြသော I.C.S, B.C.S များ ကြီးစိုးရာ ဌာနဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ် နှစ်ဦးကာလအထိ အတွင်းဝန်များရုံးဟူ၍သာ ခေါ်ဆိုခဲ့ ပြီး ယင်းနှစ် မတ်လမှစ၍ ဗြူရိုကရေ စီအုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကို ဖျက်သိမ်းပြီး အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်ပြောင်းလဲ ခဲ့ရာ၌ ၀န်ကြီးများရုံးဟု အမည် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ အတွင်းဝန်ရုံး၏ အလယ်ဗဟိုရှိ ပါလီမန် အဆောက်အအုံ၌ပင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့၌ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ရာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အခြေခံ လမ်းညွှန်ချက်များကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ ယင်းနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တကွ ၀န်ကြီးအချို့သည် အတွင်းဝန်ရုံး ပထမထပ်ရှိ အစည်းအဝေးခန်း၌ ကျဆုံးခဲ့ ရပြီး ၁၉၄၈၊ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် နေ့တွင် အတွင်းဝန်ရုံးတွင်းရှိ ယူနီယံဂျက် အလံကို ဖြုတ်ချပြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကို စတင်လွှင့်ထူခဲ့သည်။
အဆိုပါ သမိုင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်ခဲ့သည့် အဆောက်အအုံကြီး ဖြစ်၍ ငှားရမ်းရန် မသင့်တော်ကြောင်း ချင့်ချိန်လုပ်ကိုင်ရန်လိုကြောင်း သုံးသပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးမရကို ပြောင်းနေပြီ ပြောသူများ ပြောကြရဲ့။ လုပ်နေတာတွေကြည့်တော့ အရင်နအဖ အစိုးရလက်ထက်က စီမံကိန်းတွေ ပြန်အသက်သွင်းနေတာပဲရှိတယ်။ အခုမှ ရွှေညဏ်တော် စူးရောက်ပြီး အကြံကောင်း ညဏ်ကောင်းတွေ ထွက်လာတယ် မထင်ကြလေနဲ့။ နအဖ နဝတ အစိုးမရ လက်ထက်ကလည်း ဒီလိုပဲ မဆလတပါတီ အစိုးရလက်ထက်က ပရောဂျက်တွေပဲ နာမည်ပြောင်း ပြန်လုပ်တာ။ ဒီကောင်တွေမှာ plan A plan B plan C ဆိုပြီး စီမံကိန်း အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ သွားနေတာ။ နွားမဖြစ်ချင်ကြနဲ့………။ :mad:
knowledge ပေးဘို့ အလွန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ သိသာပါကြောင်း။
သူတို့ပဲ မော်ကွန်းအက်ဥပဒေ ထုတ်ခဲ့တယ် .. သမိုင်းဝင်နေရာတွေကို ထိန်းသိမ်းထားရမယ် တဲ့
အခုတော့ .. ဗိုလ်ချုပ် ကျဆုံးခဲ့တဲ့နေရာ ရှိနေတဲ့ အဆောက်အဦးကိုမှ ………….
အဲဒါဆိုရင် ဦးနေ၀င်းနေခဲ့တဲ့ အိမ် .. ဦးသန်းရွှေ နေခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်က အိမ်တွေကိုပါ ဟိုတယ် လုပ်ကြပါဦးလား လို့
မိသားစုတစ်စု အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် စီးပွားပျက်ရင်တောင် တတ်နိုင်သလောက် အိနြေ္ဒဆောင်ကြတာပဲ။ ခုဟာက………………….
ဒီမိုကရေစီအစိုးရက.. အခွန်နဲ့ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေရှာရတာ..။
အခုအစိုးရက..တပ်ကလာတော့.. တကယ့်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့..နိုင်ငံရေးသမားတွေလို… မလုပ်တတ်ဘူး…
မြေကြီးတူးရောင်းလိုက်..။ မြေပေါ်ဟာတွေရောင်းလိုက် ဖြစ်နေတော့တာပေါ့..။
ရွာထည်းမှာ လိုက်ပြီး မောင်းလိုက်ထုနေရသေးလား
ကိုပု နဲ့ ဦးကြောင် ပြောတော့မှ ရေးတေးတေးသဘောပေါက်တယ်။
ဒီကောင်တွေ (ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ) သမိုင်းတန်ဘိုးဆိုတာကို လုံးလုံးမသိတာတော့မဟုတ်ဘူး…….
ဘာလုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုလဲ လုံးလုံးမသိတာမဟုတ်ပါဘူး။
ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခွင်ရိုက်လုပ်စားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံအကျိုး အမျိုးသားအကျိုးကို မထောက်ထားပဲ ကိုယ်သက်တမ်းရှိတုန်း ရသလောက် လက်ကုန်နှိုက်ရောင်းစားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိုးမျိုးနဲ့တော့ ဒီသူခိုးတွေကို ယုံနိုင်ဘို့ ဝေးပါသေးတယ်။
ဦးခင်ရွှေ က ယူပြီး ဟိုတယ် ဖွင့်မယ် လို့ ပြောပါတယ်